Daryeelka Ilkaha – Maxaa Sababa Cudurada Ilkaha Kudhaca? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ilhaan Ciise Maxamed, February 9, 2020
Laba Nin oo Walaala ah oo Muddo 26 Sano ah Aan Wada Hadlin oo Si Kasta Inta La yeelay La heshiisiin Waayey – Bal eeg sababta keentay khilaafka gaammuray ee labadaas nin
Daryeelka Ilkaha – Maxaa Sababa Cudurada Ilkaha Kudhaca?
Ilhaan Ciise Maxamed — July 30, 2019
Daryeelka Ilkaha waxaa loola jeedaa in la’ilaaliyo caafimaadka ilkaha iyo guud ahaan Afka, si loo hubiyo nadaafadda guud ee Afka taas oo qeyb ka ah in eysan ku dhalan bakteeriyada ku dhalata ilkaha.
Maxay Yihiin Cudurada ku dhaca Ilkaha:
Waxa Aan Soo Qaadaneynaa 4ta Cudur Ee Ugu Caansan Kuwaas Oo Saameeya Ilkaah:
Cudurada ku dhaca ciridka (periodontal disease): Waa xaaladda uu caabuqa saameyn kuyeesho xuubka jilacsan ee ciridka, kaas oo ku dahaaran ilkaha.
Caries (Tooth decay): Ilka suuska waa xaaladda ilkaha uu bur-bur kuyimaado waxaana sababa aashitada ey Bakteeriyadu ku siideyso Ilkaha. Intabadanna iligga bur-buray waxa uu yeeshaa kalar kaduwan ilkaha kale oo iliggu waxa uu noqdaa jaalle ama madow.
Tooth fracture: Waa in uu iligga jabo, jabniinka iligga waxaa keeni karo wax awood badan in ey iligga ku dhacaan.
Toothattrition: Ma’aanan u helin eray bixin toos ah, laakiin waxa aad u fahantaa in uu yahay eraygaan ama cudurkaan is-xoqidda ilkaha. Waa in iliggu uu diismaa taas oo katimaado ciriirin ama xoqidda iliga kale uu ku haayo iligaas xoqmay.
Calaamadaha Lagu Garto Cudurada Kudhaca Ilkaha:
in lagu arko Afka boog, nabar ama dikaan, kaas oo boksoon waaya muddo todobaad ah.
Barar ku yimaada ciridka, gaar ahaan xilliga lacadayanayo.
Dhiig in uu kayimaado Ilkaha, xilliyada uu qofka wax ruugo ama uu cadayanayo.
Xanuun iyo qanjirada afka oo barara.
Qofka in uu qabawga ama kuleelka uu dhibo.
Iligga oo soo bur-bura.
Maxaa Sababa Cudurada Ilkaha Ku dhaca:
Nadaafad darada afka: Haddii aadan cadayan muddo saacado badan ah sida 24saac in ku dhaw, ilkahaada waxaa kudhalanaya bakteeriya waxa eyna abuureysaa in bur-bur uu kuyimaado ilkaha.
Af- qallaylka: Dheecaanka saliifaha(saliva) ayaa qeyb weyn ka-ah in uu afka qoynaado, qoyaankaas waxa uu ilaalinayaa bakteeriyada. Waa sida biyo, afkana waxa uu isticmaalaa in ilkaha lagu dhaqo.
Macaanka in lagu seexdo: Intabadan marki uu qofka cuno marki uu seexanaayo hadana uusan cadayin, waxa uu fursad u abuuray bakteeriyadii bur-burin lahayd ilkahiisa. Bakteeriyada waxa ey ugu jeceshahay macaanka waxa eyna qodeysaa iligga gudihiisa si’ey u quudato macaanka.
Arimo Caafimaad: Xaalado caafimaad ayaa kaqeyb qaadan kara in ey sababaan bur-burka ilkaha sababta oo ah aashitada ey soo deyso calooshaada ayaa soo gaari karta Afka. Inta bandanna waxa ey aashitadaas saameysaa hunguriga iyo ilkaha.
Sidee Ayaa Looga Hortagi Karaa Cudurada Ku Dhaca Ilkaha:
Cadayga: Bad qabka ilkaha waa cadayga, waxa aan wada ognahay sida diinta ey noogu boorisay cadayga.
Findhicirasho(flossing): In ilkaha dhaxdooda laga bixiyo guud ahaan waxa kuhara marki wax lacuno kaddib. Ama qori loogu talagalay ku findhiciro ama dun nadiif ah, muhiimaddu waa in aad ilkaha dhaxdooda aad nadiifisaa.
Booqo dhaqtarka ilkaga: Lix bil kasta, xitaa haddii eysan ilkaha ku xanuuneyn.
Haddii aad buraash ku cadeysato waxaa kuu wanaagsan in aad bil kaddib iskabaddasho buraashka.
Tags: Daryeelka Ilkaha:
Next post Cudurada u Kala Gudba Dadka iyo Xoolaha
Previous post Baraha Bulshada Waa Meel Dadka Lagu Gumaado!
Waa Maxay Dhaqaalaha “economics”? 3.50 views per day | by Cabdijabaar Sh. Axmed